करिश्माले छाडिन् 'नयाँ शक्ति' ?
करिश्माले छाडिन् ‘नयाँ शक्ति’ ?
प्रकाशित : सोमबार, जेठ १३, २०७६१४:२४
देश । करिश्मा मानन्धरलाई नेपाली फिल्मनगरीमा सदाबहार अभिनेत्री भनेर चिन्ने गरिन्छ । उनले अभिनय गरेका फिल्मले सफलता पाएका छन् भने उनको सुन्दरताको चर्चा सदैव हुने गर्छ । यिनै करिश्मा केही बर्ष पहिले नयाँ शक्ति पार्टीमा प्रवेश गरिन् । उनलाई पार्टी संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै पार्टीमा प्रवेश गराएका थिए ।
नयाँ शक्ति पार्टीको विकास र विस्तारका लागि नायिका मानन्धरले आफु सदैव लाग्ने र समाज सेवामा अगाडी बढ्ने बताएकी थिइन् । तर , पछिल्लो समय उनले दिएको एक अन्तर्वार्ताले उनले पार्टी छोडेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालको राजनीति एकदमै वुझ्न नसकिने रहेको भन्दै आफूलाई एकदमै गाह्रो भएको प्रतिक्रिया उनले दिएकी छिन । ‘पदका लागि हुने द्धन्द्ध आफ्ना लागि नसुहाउने रहेछ’ उनले भनिन् । नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै नायिका मानन्धरले आफूले अब यो पार्टी छाडेको घुमाउरो शैलीमा बताएकी छिन् ।
‘नयाँ शक्ति पार्टी र फोरमको एकिकरणपछि बनेको स्थितीलाई राम्रो छ’ करिश्माले भनिन् ‘ तर म त्यहाँ सामेल हुने पर्छ भन्ने छैन् ।’ साथै उनले आफु स्वतन्त्र भएर आफ्नो क्षेत्रको सेवा गर्न सक्ने र चुनाव लड्न सक्ने तर्फ पनि संकेत गरिन् । ‘थपडी बजाउन मात्र राजनीति गर्नु हुँदैन , परिवर्तनका निमित हो’ उनले भनिन् । करिश्माले डाक्टर बाबुराम भट्टराइको पार्टी र उपेन्द्र यादवको पार्टी एकिकरणपछि बनेको नयाँ पार्टीमा सहभागी नहुने र कसैको बाँसुरी नबजाउने स्पष्ट पारेकी छिन् । (नायिका मानन्धरले नयाँ पत्रिकासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
सु चिङ बर्दियामा
कृत्रिम अभाव गराउनेलाई कडा कारबाही गरिने
न्युयोर्कमा एकै दिन ७ सय बढीको मृत्यु
इण्डो – पाक समस्यामा चीनको यस्तो सुझाव